नयाँ संविधान २०७२ ले के दियो ? के दिएन ? – दिपेन्द्र झा | WWW.HATTERI.COM
You are here : WWW.HATTERI.COM » Article, Featured » नयाँ संविधान २०७२ ले के दियो ? के दिएन ? – दिपेन्द्र झा
नयाँ संविधान २०७२ ले के दियो ? के दिएन ? – दिपेन्द्र झा
प्रकाशित मिति Sunday, September 20, 2015
सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतले यो संविधानमा आफ्नो स्वामित्व अनुभूत गर्न सकेका छैनन । प्रक्रियामा सामेल भइ हस्ताक्षर गर्न सकेको छैनन र एक महिनामा झण्डै ४२ जनाको ज्यान गयो । यसकारण अधिकत्तम लचकता देखाई संशोधनको विकल्प छैन । नयाँ सरकार बन्नु भन्दा अगाडी नै यस्ता विवादित र मधेशी, थारु लगायतका सिमान्तकृत समुदायको हक कटौती गर्ने धाराहरुको संशोधान आवश्यक छ । आन्दोलित समुदायहरु सधैं मूलधार प्रक्रियाबाट बाहिरिने खतरा विद्यमान छ । यसकारण वार्ता मार्फत तत्काल संसोधनका लागि प्रस्ताव तयार गरियोस् !
(लेखक कानुन अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी हुन् ।)
« गायिका रोशाको बिहे रिसेप्सन
नेपालको संविधान हङकङमा जलाइयो – एभरेष्ट विक्ली »